Uwafumana njani amashiya - Iingcebiso kunye nokhathalelo kuMadoda ngeSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Ubuhle bendoda buyakhula kwaye siyathanda ukubukela naziphi na iinkcukacha eziye zadlula ezandleni ezithile Ukuphelisa ulungelelwaniso olupheleleyo. Kukho amadoda ekubheja kuwo lungisa iinwele zakho kunye nezakho iindevu kwaye balugqithisile ukhathalelo olusisiseko lokunikezela kunye nokukhathalela nkqu namashiya abo. Kungenxa yoko le nto apha siza kubonisa Ungalufumana njani olona lononophelo lwale ndawo yobuso.
Unonophelo kunye nobuhle buhamba kunye kwaye kukho amadoda asele eceba ukukhathalela indawo zomzimba eziqaqambisa umtsalane wazo. Amashiya zibonelela ngobuntu kwaye xa zisebusweni zibeka imbonakalo kwaye ziyinxalenye yenkangeleko yobuso.
1 Kutheni usenza amashiya akho?
2 Iimveliso kunye nezixhobo zokulungisa amashiya akho
3 Imilo yamashiya ngokobuso bendoda
4 Uyenza njani amashiya?
Kutheni usenza amashiya akho?
Kukho amadoda athi khange bazame ukulungisa amashiya abo kuba eyinxalenye yenkangeleko yabo kwaye bakholelwa ekubeni akufuneki batshintshe umfanekiso wabo. Kukho amashiya anokuba ngqindilili kwaye enze amehlo amancinci kakhulu okanye anike imbonakalo enzulu ngakumbi egxininisa amanqaku.
Ngomqondiso wokufuna ukususa iinwele ezingaphezulu uyayibona indlela onokuyiphucula ngayo inkangeleko yakho. Ayiseyiyo into yokuthopha kuphela enokuma ngaphandle, kodwa inyani yokubona ukuba kukho inkathalo ekhethekileyo kwaye ujonge ubuso obuncinci kunye nokuhlaziya.
Gcina ukhumbula ukuba ukukha okanye ukulungisa amashiya akho akunyanzelekanga, kodwa kunjalo inegalelo ekubeni yinxalenye ebalulekileyo yokunika i-retouch kuzo zonke ezo ntshiyi Ukuba baneenwele ezingaphezulu kwabo, kubandakanya nebrowbones. Zizinto ezincinanana ezichukumisayo kwaye ayinanto yakwenza nokuthambisa ubuso kubasetyhini (ukushiya amashiya amancinci), apho iimpawu azinakuphulukana neempawu zobudoda.
Iimveliso kunye nezixhobo zokulungisa amashiya akho
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo ukuze ukwazi ukwenza oku kuchukumisayo. Kukufumana kuphela eyona ndlela ikulungeleyo, ekubonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo kwaye uxhasa ukucaphuka okuncinci xa ukhupha iinwele.
I-tweezers zokuhlutha amashiya zikhululekile kwaye kulula ukuzisebenzisa. Isetyenziswa ngesandla kwaye zisetyenziselwa ukususa iinwele naphina apho ufuna zinyamalale khona. Kuyenzeka ukuba uyisebenzise kwaye ugcine ixesha kakhulu, kodwa eyona nto imbi kukuba kufuneka uyenze yiba nomonde ngakumbi kwaye ube neliso elihle ukukhupha iinwele ezintle ngakumbi.
Iibhleyidi yenye indlela esebenzayo kwaye ngokukhawuleza ukufumana iziphumo. Ziye zahlengahlengiswa ngokobungakanani kunye nokumila ukuba zichane ngakumbi kunamabala emveli. Indlela yayo iquka ukutsheva yiyo loo nto kulula kwaye ingenabuhlungu. Impazamo kuphela kukuba ngokunganyibiliki iinwele, kuya kuvela emva kweentsuku ezimbalwa.
Isilungisi sombane Esinye isixhobo esiluncedo kakhulu nesibhetyebhetye. Ezi zixhobo zineentloko ezininzi onokuzincamathisela ukwenza umsebenzi owufunayo ngokuxhomekeke kwinxalenye oza kuyicheba. Kukhululekile kwaye akukho zintlungu Kwaye ukungathandeki kwayo kufana nekhaba elichazwe ngasentla, ngokungazitsali iinwele ezingcanjini, ayizukuthatha ixesha elide ukukhula emva kweentsuku ezimbalwa kakhulu.
I-Waxing yenye indlela efanelekileyo kwaye ichanekile ngakumbi kuba isusa zonke iinwele kwibala elinye, ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuba kufanelekile kangakanani ekususeni zonke iinwele ongazukuzibona ekuqaleni okanye ezingakhange zibonwe. Uncedo lwayo kukuba itsala iinwele ezingcanjini, ithatha iintsuku ezininzi ngakumbi ukuba iinwele ezintsha ziphume kwaye ukusilela kwayo okuncinci kukuba xa uzikhupha kubangela iintlungu.
Imilo yamashiya ngokobuso bendoda
Sibonisa isishwankathelo malunga nohlobo lwamashiya ekufuneka uwaqwalasele ngaphambi kokuba uqale ukusebenza kuwo. Kuxhomekeke kuhlobo lobuso, enye indlela okanye enye iya kwenziwa eya kuthanda ukunika ukukhanya:
Ukuba bane ubuso obuncinci awona mashiya atshoyo iya kuba yile ilungileyo, kodwa ngaphandle kokuyikha kakhulu.
Ku Ubuso obujikelezileyo amashiya aphambili ngalawo anearch ebanzi ngokufanelekileyo kwaye ajikele phezulu.
Ku Ubuso besikwere amashiya kufuneka abengunxantathu ukumila.
Ku ubuso obude Amashiya abukeka emhle ngokusikwa ngokuthe tye.
Ku Ubuso obu-okweqanda Akukho mfuneko yokulungisa amashiya nangayiphi na indlela, susa nje zonke iinwele ezikukhathazayo ngaphandle kokuchukumisa kakhulu.
En ubuso apho amehlo asondelelene kakhulu Kuya kwanela ukuchukumisa indawo engqongileyo kwaye kubaluleke kakhulu ukususa intsimbi.
Uyenza njani amashiya?
Inyathelo lokuqala kukujonga amashiya kwaye yenza umbono ochanekileyo wazo zonke iikona kunye neendawo ezincinci esifuna ukuzithambisa. Kule meko, kuya kufuneka uhlalutye kwaye wazi ukuba siza kuziphelisa zonke iinwele ezishiyekileyo emacaleni naphakathi kwamashiya.
Indawo kufuneka ihlanjwe ngesepha ethambileyo, amanzi ashushu kwaye uyomise kakuhle ngetawuli. Siza kucofa iinwele zethu kancinci ngeminwe ukunceda iifollic zeenwele zivuleke.
Izixhobo ezinokukunceda ukususwa kweenwele zezi isipili esikhulisayo, isibane esikhulu kunye nezinto ezithile zokuthambisa okanye izixhobo ngaphambili. Unokusebenzisa isikere esincinci ukususa ezo nwele zide zivelileyo.
Okokugqibela siza kukama amashiya ngebrashi encinci kwaye sisebenzise ivithamin E okanye iloe vera lotion ukunqanda ukucaphuka okunokwenzeka kunye neenwele ezingaphakathi okanye ezingaphakathi.
Njengengcezu yokugqibela yeengcebiso kufuneka uyicinge loo nto akukho sidingo sokucheba kakhulu okokuqala. Kuya kufuneka ususe zonke iinwele ezishiyekileyo kwaye njengoko iintsuku zihamba, qhubeka nokubamba kwakhona. Kancinci kancinci sinokuba nobuganga bokuzisusa ezo ndawo ekuqaleni esasingafuni ukuzoya kwaye sibone ukuba zilungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Uyenza njani amashiya akho